Amaqhinga Amakhosikazi Amadoda
Amadoda awona mabi kakhulu kunabesifazane abaqonda iingcebiso kunye nokuxazulula iingcinga. Yingakho amaqhinga amabhinqa amaninzi amelana nabasebenzi asebenza kakuhle. Kule meko, amadoda angcono kunabesifazana, akwazi ukulungisa iingxaki kwaye ahlale ejongene nabo.
Uphi ubuso obonakalisa ubuqhetseba obunqamlekileyo ekusebenziseni kakubi? Masizame ukuqonda.
Amaqhinga amabhinqa acingisisa ngengqondo yezinto
Ukuxhatshazwa ngumfazi ngokumelene nomntu ngokuqhelekileyo kuhlose ukufumana into umntu anganikiyo okanye ofuna ukuyenza okanye ufuna. Ngenxa yokuxhaphaza, indoda ingenza into engakhange iyenze yona, kodwa kwiimeko ezininzi iyakwazi ukuba iyaphathwa, iyatshitshiswa kwaye iya kuba yintlinkqalazo okanye ivalwe kuyo.
Ubuqhetseba besifa ngokuqhelekileyo bubuqili, buhle kwaye bubumnandi kumntu. Kungenxa yoko akanako ukumbona. Mhlawumbi ufuna ukuba athenge iikhilogram ezintlanu zamazambane. Ungayisebenzisa, utsho ukuba ade afike esitolo, isidlo sakusihlwa asiyi kufumana. Kwaye ungabonisa ubuqili bomfazi: mcele ukuba athenge into ayifunayo - idiski entsha kunye ne-movie okanye ibhotile yebhiya, kwaye ngasendleleni makabambe iikhilogram ezintlanu zamazambane. Kweso sicelo, kukho ukuphathwa okuncinci, kunye nokunyamekela.
Amaqhinga amabhinqa enza ngcono xa emnika umthamo wokuqwalasela
Ukuqwalaselwa kwindoda enjalo yindwendwe yokulondoloza yonke indawo evumela ukuba uvuselele ubudlelwane naye ngexesha lokuzola, kwaye uphuculwe ngexesha lokuxabana nokuxabana. Kwimiba yokuqwalasela, abafazi banokuphakama okukhulu kunamadoda. Inyani kukuba abafazi banako ukuzithoba iimvakalelo, iimpawu kunye namava omntu. Benza oku ngexabiso lokunyuka kwengqondo kumbala weemvakalelo zokuthetha nokuziphatha, kwaye le mgangatho ifumaneka kubo, ayifuni imfuno.
Ukuba ufuna ukufezekisa into evela kumntu, qaphela oko akhathalele ngoku okona. Umfazi onamava uya kuhlala ehlula ukuxhalabisa ngempilo yesihlobo esivela kwimeko esebenzayo. Musa ukushiya amava akhe, ukucela ukuba uthethe kwaye uphulule iimvakalelo zakho ngaphandle. Kuphela emva kokuba indoda ipholile, kuyacaca ukuba uyicinezele ngeengxaki kunye nezicelo, ngaphandle koko ungaba nokucaciswa okungahambi kakuhle kobudlelwane.
Iimeko apho amaqhinga amabhinqa aphuthiweyo
Akunjalo amaqhinga kunye namaqhinga asebenzayo kumadoda. Amacebo ahlala engaqondi, ngoko ke ukuba ufuna ukuba enze into ethile, kufuneka ucele ngqo, ebunzini. Nangona ixhala malunga neengxaki ezintle njengeentyatyambo njengesipho okanye indlela ekhethekileyo yoxinzelelo ngexesha lolwabelana ngesondo.
Ngoko ukuba awufumani ngcamango yokuba oku kuphikisana nale nkcazo ngasentla, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ixesha kunye nendawo ayisoloko ilungelelanisa iinqununu zamakhosikazi malunga namadoda. Lungiselela indoda ngencoko ebalulekileyo okanye isicelo onokukunceda ngoncedo lweentlobo zabasetyhini, kodwa eso sicelo sikulungele ukuthetha ngokuthe ngqo. Ngoko uya kuqonda ngokukhawuleza into oyifunayo, kwaye xa ekhululekile, uyavuma ukukunceda.
Amadoda amaninzi ahlala ekhuselekileyo, kwaye akayithandi xa ibhinqa lisenza ngokucacileyo ukuthatha inyathelo. Yingakho i-sphere yesilingo yinkalo apho ukusetyenziswa kwamacandelo amabhinqa kulungelelanisa ngaphezu kwazo zonke.
Ukuba ufuna ukumcekisa, inqaku elichanekileyo liyiso kwiso. Jonga ukuba umi kangakanani ixesha, likhangele emehlweni akho okanye liyakunqanda. Bobabini abesilisa nabasetyhini abakwazi ukufihla imfesane okanye ukuchasana kwinqanaba elingengomlomo. Ngokukhawuleza kwaye ngokuphindaphindiweyo ukhangela iso, kwenyuka ithuba lokuba uya kuhendwa.
Enye indlela yokubonisa umntu ukulungela kwakho ubudlelwane ngumsebenzi okhethekileyo kunye nokunyakaza. Ukuba ibhinqa ligubha isithungu emlenzeni wayo, libukeka libuhlungu, kwaye amadoda amaninzi, engazi, athathe ithendi kwisenzo. Akukho nto ekhohlisa ngayo ukuhamba kwezandla xa ibhinqa libavuthela ngentloko. Ukubonisa amabele akhe, umenza amazi ukuba akachasani ngesondo, kwaye abaninzi abantu abakhululekile bakulungele ukuthatha. Ezinye iimpawu zesilingo zithinta intamo. Ukuba intamo yowesifazane igutyungwe ngeenwele, ize imbonise ekuhambeni kwesandla sakhe, iphinda ihende ngokungathandabuzekiyo umntu oye wamkhangela. Yonke le mizobo ayifanele ibe yinto eqhelekileyo, idlalwe, kwaye ayifanele iphinde iphindwe kaninzi. Ukuba ufuna ukudukisa umntu ukuze acinge ukuba uyakunyenga, zama ukuba yendalo kwaye uziphathe kakuhle.
Amaqhinga kaM Muse: indlela yokuphakamisa jikelele ukusuka kwindoda
Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa ukuba umntu uphumelela ngakumbi xa ekholelwa kuye. Indoda kufuneka ibonakale eyona nto ininzi kakhulu: i-smartest, ihlakaniphile kwaye inenhlanhla. Into ebangel 'umdla kukuba ukuba umfazi othembekileyo ukhona kunye nomlimi ophakathi, ohlala emxhasa, unokufikelela ngaphaya komntu onetalente ohlala nomfazi onomdla.
Abafazi abahlakaniphile baqonda kakuhle ukuba abantu abazizityebi nabadumileyo abanako konke. Ukongezelela, kukho ubuninzi obuhle bobuhle obuzungeze kubo ukuba akunakukwazi ukukhuphisana nabo ngokuqwalasela amadoda asele asele. Yingakho bakhetha ukuba yimyuziyam ukuya kwi-genius yokuqala.
Ukudumisa okuzenzekelayo komfazi akwanele nhlobo. Indoda ifanele ive amazwi okubonga rhoqo ngamaxesha. Kulungile noko, ukuba uthethwa ebusweni bomntu. Ngokukodwa amadoda aphefumlelwe ngokuthelekisa namanye amadoda, apho wonke umntu ojikelezileyo elahlekelwa nguye. Iqhinga lomfazi apha kukuba akanako ukuthetha inyaniso rhoqo. Abasetyhini bamabonakalisi abancinci, ngoko banokubandakanya intetho yokudumisa ngaliphi na ixesha nangasiphi isizathu. Into ephambili apha akuyikuyidlulela kwaye ungazami ukuthetha ngokunyanisekileyo kwiimpawu zendoda enobuthathaka kuye, mhlawumbi uya kukhankanya ukuba ungathembeki.
Ngokubanzi, sinokuthi abafazi, basebenzise ezinye iindlela zokusebenzisana namadoda, banako ukudala ihlabathi labo kwiphupha elinjalo. Kwaye ukuba akukho nkosana ejikelezileyo kuwe ngehashe elihle, unokutshata kunye nekhasi kwiiponsi. Into ephambili - inkolelo yakhe kumntu kunye nokukwazi ukubandakanya ubulumko bentombi, eya kukunceda i-pony ipony kwi-stallion, kwaye wenze iphepha libe yinkosana. Kwindoda ehlakaniphile-akukho nto inokwenzeka!
Ukufumana ngempumelelo i-Intanethi
Indlela yokumazi indoda kwimizuzu yokuqala yokumazi
Ndingathanda njani umfana ngeposi?
Iholide yothando kunye nokuthanda iinjongo
Iphi ivumba kunye nama-aroma athabisa abantu
Uya kuphi na umhla wokuqala
Iimpazamo eziqhelekileyo ezenziwa ngabasetyhini ngexesha lokudlala ngothando
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-dioptase
Ukunyamekela ubuso, izimonyo zeMatis
Izindlela zokonyango kweekhonkwane ezingenanto
Ukuphononongwa kwefilimu "I-X-Files: Ndifuna Ukukholelwa"
Ngaba i hookah yonakalisa impilo?
I-Horoscope yezilingo zezilwanyana ze-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Unakekele ulusu olomileyo ekhaya
Ukuba usuku lwakho lokuzalwa luMvulo?
ULyme Vaikule uphatha izifo ngendlala
Isimo sezulu eMoscow nakummandla waseMoscow ngo-Oktobha 2017, isibikezelo esichanekileyo seziko le-Hydrometeorological Centre
Izandla ezivela kwiipini zepine kunye neplastiki kwi-kindergarten kunye nesikolo
Ukuhlaziywa kwesikhumba ecaleni kwamehlo: iindlela ezingcono